mardi, 11 juin 2019 21:41
Madagasikara – Alemana: Hanamafy ny fiaraha-miasa
Tafaresaka manokana tao Genève Soisa, androany, ny filoha Andry Rajoelina sy ny Rtoa Angela Merkel, Chancelière an'i Alemana izay samy miatrika ny fankalazan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Asa (OIT) ny faha-100 taona nijoroany. Sehatr'asa maro no niarahan'ny roa tonta nidinika toy ny angovo, ny tontolo iainana ary ny fampianarana.
Taorian’ny fihaonana dia nilaza ny Filoham-pirenena fa handefa delegasiona avy amina ministera vitsivitsy ho any Alemana, araka ny fanasana nataon-dRtoa Angela Merkel ho fanamafisana ny fiarahamiasan’ny firenena roa tonta.
mardi, 11 juin 2019 21:08
Toamasina: Rongony 55kg saron'ny Polisy
Natao tao anaty valizy maromaro ireo rongony 55kg ireo ary notaterina tuc-tuc no saron'ny Polisy teo Ankirihiry Bazary, ny alin'ny 6 jona teo.
Avy nalaina tao amin'ny "Gare Routière" ilay rongony ary nokasaina haterina tany amina mpamongady rongony iray ao Andranomadio no tra-tehaka.
Tovolahy iray, 19 taona, no tratra niaraka tamin'ity rongony ity, tratra ihany koa ilay mpamily tuc-tuc nanaiky nitondra izany tamin'io alin'ny 06 jona io.
Mbola karohina kosa ilay mpamongady rongony tompony.
Tsy fantatra ny tena fiavian'ny rongony.
mardi, 11 juin 2019 20:46
Fifidianana Depiote: Ny sabotsy 15 jona no hamoaka vokatra ny CENI
Tonga teo amin'ny CENI Foibe, ary voakirakira avokoa ny voka-pifidianana avy amin'ireo Distrika miisa 119 eto Madagasikara.
Amin'ny sabotsy 15 jona maraina no hanambara ny vokatra feno vonjimaika ny CENI.
Mandray fitoriana mikasika zotram-pifidianana ny vaomiera hatramin'io andro io, araka ny fanazavana nataon'ny mpampakateny Razafindraibe Ernest.
mardi, 11 juin 2019 19:28
CHRR Antsirabe: Nahazo toeram-pitsaboana "Maman Kangourou"
Nahazo ny "Centre de soin Maman Kangourou" ny hopitaliben'Antsirabe, notokanana androany talata 11 jona, izay ahitana efitrano natokana handraisana ireo renin-jaza miteraka zaza tsy ampy lanja na latsaky ny roa kilao sy sasany.
Ny Fondation Orange Madagascar sy ny fikambanana Compassion Madagascar no nahazoana izao fanatsarana izao.
200 isam-bolana eo ny Reny miteraka ao amin'ny Hopitaly Atsimo na CHRR Antsirabe, ka ny 10% n'izany no mbola tratran'izay tsy fahampian-danja izay, ka zava-dehibe ny fahazoana ity toerana ity.
Isan'ny paika manomboka malaza maneran-tany ity "Maman Kangourou" ity, izay mpitsabo kolombianina no nahita izany, ary manan-tombo kokoa noho ny fampiasana ny fitaovana "couveuse".
mardi, 11 juin 2019 16:26
Gara Jean Robert: Nodimandry androany talata 11 jona
Tokony tamin'ny telo ora maraina teo no nisento farany ity Governoran'Antsiranana teo aloha ity, rehefa nitsabo tena maharitra.
Niainga io tolak'andro io teto Antananarivo ny vatana mangatsiakan'i Gara Jean Robert, ka hiazo an'Antsiranana amin'ny fiarakodia.
Talé Jénéralin'ny SECREN izy talohan'ny naha Governora azy tamin'ny andron'ny Filoha Didier Ratsiraka.
Fantatra ihany koa izy teo amin'ny sehatry ny baskety sy ny baolina kitra.
Rehefa tsy re nandritra ny fotoana maharitra, dia tazana kosa izy nanohana ny kandida ho solombavambahoaka ho an'Antsiranana Papa Soulé.
mardi, 11 juin 2019 15:03
Nécrologie: Gara Jean Robert n'est plus
Ce mardi 11 juin vers 3h du matin, l'ancien Gouverneur d'Antsiranana, Gara Jean Robert a tiré sa révérence, après une longue maladie. Il a été hospitalisé à Antananarivo, mais tous les soins ont été vains.
Le corps partira ce jour même par voie terrestre vers Antsiranana.
Pour rappel, Gara Jean Robert a occupé le poste de Directeur Général de la SECREN avant d'être nommé Gouverneur de la province d'Antsiranana du temps du Président Didier Ratsiraka.
C'est un grand sportif, connu dans le monde du basket et du football.
Après une longue silence, on l'a vu ces derniers temps soutenir la candidature de Papa Soulé pour la dernière élection législative.
(Photos Net: Gara Jean Robert à droite de la photo en descendant de l'hélico)
mardi, 11 juin 2019 14:49
Tony Parker: Hiato amin’ny maha mpilalao baskety azy
Nanao fanambarana, omaly, ilay kalaza frantsay Tony Parker fa hiato tsy ho mpilalao baskety intsony.
37 taona ny lehilahy ankehitriny, 20 taona nilalaovana teo amin’ny sehatry ny baskety avo lenta, ka ny 18 taona tamin’io tao amin’ny NBA tany Etazonia. Mpilalao, mpandrindra tao amin’ny klioban’ny San Antonio Spurs i Tony Parker nandritra ny taom-pilalaovana 17, izay nahazoany anaram-boninahitra efatra tamin’ny taona 2003, 2005, 2007 ary 2014.
Tao amin’ny Charlotte Hornets no namaranana ny maha mpilalao baskety azy.
Voahosotra ho mpilalao baskety eoropeana mendrika tamin’ny famaranana ny fifaninanana NBA ny taona 2007 i Tony Parker. Efa in’enina voafantina handrafitra NBA All-Star Game ihany koa izy, dia ny 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 ary 2014.
In-181 nisalotra ny akanjon’ny telosoratra frantsay i Tony Parker, niaro ny voninahitr’i Frantsa. Nahazo medaly volamena tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Eorôpa tamin’ny 2013, medaly alimo tamin’ny 2015.
mardi, 11 juin 2019 14:39
Kitra - CAN 2019: Ireo mpilalao hiazo an'i Maroc
Hanainga anio hiazo an’i Maroc ny Barea, hanohy ny fampivondronana fahatelo sady farany mialoha ny hiatrehana ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019, hatao any Egypta ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay 2019.
Hanao lalao ara-pirahalahiana amin’i Mauritanie ny Barea amin’ny zoma 14 jona.
Vondrona B no misy an’i Madagasikara, miaraka amin’ny Nigéria, Guinée ary Burundi. Ny 22 jona ny lalao voalohan’ny Barea, hifandonany amin’i Guinée.
Ireo mpilalao hiazo an'i Maroc:
mardi, 11 juin 2019 14:29
Aina Kuric: Nametra-pialana tsy ho depioten’ny « La République en Marche »
Ny zoma 7 jona 2019 no nanambaran’ilay Malagasy mizaka zom-pirenena frantsay, Aina Kuric, ny fametraham-pialany tsy ho mpikamban’ny LREM (La République en Marche) antokon’ny filoha Emmanuel Macron intsony.
32 taona izao i Aina Kuric, tamin’ny aprily 2016 izy no mpikambana LREM. Nanamarika izy fa tsy miala amin’ny maro an’isa ao amin’ny Antenimiera Frantsay, saingy depiote tsy miankina manomboka izao.
Tsy manana fitokisana ireo hery velona ao aminy ny LREM, hoy i Aina Kuric, ary tsy manana finiavana hidina ifotony.
Tsy miova amin’ny foto-kevitra nijoroako aho, hoy hatrany i Aina Kuric, maneho hatrany ny hevitro aho na manaiky na tsia ny politikam-pitantanana.
mardi, 11 juin 2019 13:39
Pakistan: Nosamborina noho ny kolikoly ny filoha teo aloha Asif Ali Zardari
Efa nahazo anarambositra « Monsieur 10% » mihitsy ity prezidan’i Pakistan teo aloha, Asif Ali Zardari ity, noho io raharaha kolikoly sy fanodikodinam-bola io.
Nosamborina ny alatsinainy 10 jona 2019, tao Islamabad izy, rehefa nolavin’ny Fitsarana ny fangatahany fahafahana. Nisy sakoroka kely teo amin’ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpomba azy nadritra io fisamborana omaly io.
Filohan’i Pakistan teo anelanelan’ny taona 2008 sy 2013 i Asif Ali Zardari. Efa praiminisitra ny vadiny, Rtoa Benazir Bhutto. Efa nodimandry moa ity farany.